शेखर कोइरालाले भने- गोविन्दराज जोशीले लोकतन्त्रका पक्षमा बगाएको रगतको अवमूल्यन भयो – Dainik Sangalo
शेखर कोइरालाले भने- गोविन्दराज जोशीले लोकतन्त्रका पक्षमा बगाएको रगतको अवमूल्यन भयो
July 26, 2020 99
काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीसहित तीन जना नेतालाई पार्टीबाट निष्काशित गरेको विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
पार्टीले शनिबार जोशीसहित महासमिति सदस्य पुष्करनाथ ओझा र डडेलधुरा जिल्ला कार्यालय सचिव रामबहादुर विष्ट पार्टीबाट निष्काशित गरेको थियो ।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता कोइरालाले आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अगाडी सारेर उनीहरुलाई पार्टीबाट निष्काशित गरिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘आधारहीन र मनगढन्ते तर्क अगाडी सारेर गोविन्दराज जोशी, पुष्करनाथ ओझा र रामबहादुर बिष्टलाई कांग्रेस पार्टीबाट निष्कासन गरिनु दुर्भाग्य हो’, उनले भनेका छन् ।
त्यस्तै डा. कोइरालाले लोकतन्त्रका लागि लडेकाहरुको रगत पसिनाको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘उहाँहरूले पार्टी र लोकतन्त्रका पक्षमा बगाउनुभएको रगत पसिनाको अवमूल्यन गर्ने काम भएको छ’, उनले भनेका छन् ।
पछिल्लो समय पार्टीभित्र अन्य पार्टीका नेता कार्यकर्ता प्रवेश भइरुहेको अवस्थामा पार्टीबाट निष्काशित गर्नु उचित नभएको उनको तर्क छ । उनले पार्टीमा रहेका वरिष्ठ नेताहरुलाई निष्काशित गर्दा कार्यकर्तामा नकारात्मक सन्देश जाने बताएका छन् ।
‘एकातिर हामी अन्य पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गराउदैछौं अर्को तिर आफ्नो सम्पूर्ण जीवन पार्टीमा व्यतीत गरेका बरिष्ठ नेताहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्छौं । यसले पार्टी र कार्यकर्तामा के सन्देश जान्छ ?’, उनले भनेका छन् ।
शनिबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठकले पार्टी अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै जोशी र ओझालाई ५/५ वर्ष र विष्टलाई ३ वर्ष पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तिम स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको र अनुशासन समितिलाई प्राप्त सबुद प्रमाण अडियो र भिडियो पार्टी विधानविपरीत रहेको भन्दै कारबाही गरिएको समितिद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Prevप्रहरी हेडक्वार्टरमा कार्यरत चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
Nextमेलामा पसल राख्‍न हिँडेकी किशोरीको लेक लागेर बाटैमा मृत्यु
मेरो डिजाइको लुगा …कमला ह्यारिसले….लगाउनु नेपाल प्रति विश्वास बढ्नु हो…. : प्रबल गुरुङ
इलाममा श्रीमती, छोरी र छिमेकीलाई खुकुरी प्र,हार गरी आ, त्म, ह, त्या